Interrailing Atụmatụ N'ihi ejegharị Around Europe na a mmefu ego | Save A Train
Home > Travel Europe > Interrailing Atụmatụ N'ihi ejegharị Around Europe na a mmefu ego
Interrailing Atụmatụ N'ihi ejegharị Around Europe na a mmefu ego
(Emelitere ikpeazụ On: 17/10/2020)
Interrailing Atụmatụ na-ejegharị ejegharị na a mmefu ego bụ omume ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem gị nke ọma. eri nke gbaa ụgbọ okporo ígwè, ulo, nri na ntụrụndụ na ịdị iche iche n'etiti mba na Europe, ma e nwere ọtụtụ ụzọ na-enwe a ala-na-eri na njem. Luckily, na ụfọdụ nkwadebe, okporo ígwè njem na Europe adịghị nwere na-eri ihe fọrọ nke nta ka i nwere ike na-eche! Iji nyere gị aka na-eme atụmatụ ahụ zuru okè nke na njem gburugburu Europe, anyị na-etinye ọnụ a kemfe eduzi na interrailing Atụmatụ - Olee otú interrail gburugburu Europe na a mmefu ego.
Interrailing Atụmatụ No. 1 – Akpara gị ụzọ na tụnyere ụgbọ okporo ígwè n'ego ụgbọ
Jide n'aka na-eme atụmatụ gị European interrailing njegasi na jiri na-akwụ ụgwọ dị iche iche ụgbọ okporo ígwè n'ego ụgbọ. Sachekwa ego bu uzo di nkpa banyere ntinye anyi n’ime ime na ime nkea, ikwesiri iga njem n’oge ozo di elu. Njem ndị dị ọnụ ala n'ụbọchị izu oke. Ị ga-azọpụta onwe gị a otutu ego na Dodge na swarms nke njem. Nke a ga - enyere gị aka ịme njem maka ntakịrị akụkụ nke ihe ọ ga - efu n'oge oge kacha elu. Tulee ugwo na webusaiti anyi ma bido ime atumatu na inye onu ahia ya ụgbọ okporo ígwè na njem.
Zọpụta na ulo site na abalị ụgbọ okporo
On ọ bụla European njem ụgbọ okporo ígwè njem, otu n'ime ndị kasị expenses bụ ulo. Oke nke ebe na-ehi ụra n'abalị nke ukwuu na-adabere na gị ego na ụdị ahụmahụ ị na-achọ. Night ụgbọ oloko bụ ezigbo nhọrọ maka okodu obere ego na ulo. E nweghị ọzọ ego njem na a n'abalị ụgbọ okporo ígwè na ị ga-jirichaa gị oge site na-ejegharị ejegharị mgbe ị na-ehi ụra. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị si Milan ka Paris ma ọ bụ Venice na Paris na Thello Ụgbọ oloko bụ otu oru oma na ala ụzọ ruo gị ebe. Ejegharị ejegharị na a abalị ụgbọ okporo bụ otu n'ime oké interrailing Atụmatụ dị ka ọ bụ a kediegwu ụzọ gbatịa gị ego n'oge gị njem!
Milan na Paris Ụgbọ oloko
Venice na Paris Ụgbọ oloko
-Uru nke free obodo nkiri
Na ụfọdụ obodo, ị nwere ike ịga a dịgasị iche iche nke ngosi ihe mgbe ochie na ebe nkiri free. London nwere ahụkebe nso nke ngosi ihe mgbe ochie na-adọrọ mmasị ileta, kpamkpam n'efu. Na European obodo, dị ka Copenhagen, free mbanye ngosi ihe mgbe ochie na-awa otu ugboro n'izu. Berlin bụ ịrịba na nwere a free na-eje ije njem nke niile ka obodo isi na-adọrọ mmasị.
ọtụtụ obodo ndị ọzọ dị ka Amsterdam nwee abalị kwa afọ ebe ụlọ ebe ngosi ihe mgbe ochie ọ bụla na-emeghere ọha na eze n’efu. Gị ego na-adịghị ga-enwe nnukwu inyocha ndị a ịrịba obodo. Jide n'aka na- uru nke ndị a niile magburu onwe free nkiri.
Amsterdam na Berlin Ụgbọ oloko
Berlin na Copenhagen Ụgbọ oloko
Rie ebe ndị obodo na-eme – Interrailing Atụmatụ
European obodo nwere ike ịbụ oké ọnụ ka eri, karịsịa mgbe ị na-na a uko ego. Gbalịa iji zere iri na ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị na isi njem nleta ebe. Ndị a bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-ọzọ dị oké ọnụ ma na-àgwà nke nri bụ ihe na-erughị ebe n'ihu. Gbalịa pụọ ​​nke isi njem nleta ebe na-eri n'etiti obodo maka oriri dị ụtọ na bụ ọkara price.
Na-eche echiche nke interrailing Europe? Jiri anyị Interrailing Atụmatụ na Gaa Zọpụta A Train online lelee niile anyị nanị n'ego ụgbọ na-amalite na-eme atụmatụ gị ọzọ njem. E nwere ọtụtụ ego n'ego ụgbọ dị nile dị iche iche European okporo ígwè netwọk. Jide n'aka na ị ga-eleba anya maka ego ndị kachasị ọhụrụ site na isoro nke anyị facebook na twitter peeji nke kwa.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Finterrailing-tips%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ru na / de ma ọ bụ / pl na ndị ọzọ asụsụ.
London Train Travel travelamsterdam travelparis
Gịnị Bụ The Best Ahụmahụ nwere na Switzerland